Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » के लाई ट्रेड यूनियन अधिकार मान्ने?
के लाई ट्रेड यूनियन अधिकार मान्ने?
श्रमिक को हुन?
पहिले पहिले स्पष्ट रोजगार सम्बन्ध देखिने स्थानमा ज्याला लिएर काम गर्नेलाई श्रमिक भनिन्थ्यो । विश्वव्यापीकरण संगै रोजगारदाता–श्रमिक वीचको अस्पष्ट सम्बन्धका कारण अचेल श्रमिकको नया“ परिभाषा दिइने गरेको छ, जसका चरित्रलाई कम्तिमा चार किसिमबाट उल्लेख गर्ने गरिएको छ–
तिनिहरु श्रमिक हुन्, जो संग वस्तु र सेवा उत्पादन गर्न सक्ने पू“जी वा साधनमाथि स्वामित्व हुंदैन
पू“जी वा साधनको मालिक नभएका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्काको लागि वस्तु र सेवा उत्पादन गर्छन्,
तिनिहरु मध्ये केही स्व–रोगारहरुसंग सीमित पू“जी वा साधन त हुन्छ, तर त्यो अरुलाई रोगजारी दिन र अन्य उद्यमीका व्यवसायसंग प्रतिस्पर्धा गर्न अपर्याप्त छ,
यस अर्थमा श्रमिक भनेका उद्यमी–व्यवसायिको तुलनामा पाखा पारिएकाहरु सबै उत्पादनको काममा संलग्न व्यक्तिहरु हुन् ।
सामान्यतः अप्ठ्यारोमा परेका आºना सदस्यलाई सामाजिक रुपमा संरक्षण दिने कार्य नै सामाजिक सुरक्षा हो । सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकहरुको मौलिक हक हो, मर्यादित कामको एउटा अंग पनि हो । अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप निम्न अवस्थामा प्रदान गरिने सामाजिक संरक्षणको कार्यलाई सामाजिक सुरक्षा भन्ने गरिएको छ, जुन नेपालको टे«ड यूनियन आन्दोलनले पनि अधिकारको रुपमा नै उठाउंदै आएको छ–
नेपाली टे«ड यूनियन आन्दोलनले यी सबै विषय एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत लागू गर्न सकिने धारणा अघि सारेको छ।
सामजिक आन्दोलनको रुपमा आजको ट्रेड यूनियन–
दल सम्वद्ध या असम्बद्ध पेशा समूह र गैर राजनीतिक समूहका रुपमा ट्रेड यूनियन विभिन्न प्रकारहरु छन् । चरित्रका आधारमा “ एक पार्टी एक यूनियन, मोर्चा ट्रेड यूनियन आन्दोलन र साझा ट्रेड यूनियन आन्दोलन राजनीतकि ट्रेड यूनियन आन्दोलन” र सामाजिक आन्दोलनकारी यूनियनहरु अहिले क्रियाशील छन् ।
हिजाको जस्तो “राजनीतिक, गैरराजनीतिक–अर्थवादी, ट्रेड यूनियनवादी” को लेवल भिराइ दिएर मात्र आजको यूनियन आन्दोलनको वहुआयाम महसूस गर्न मुस्किल हुन्छ । आजको ट्रेड यूनियन आन्दोलनले सामाजिक आन्दोलनकारी यूनियनको स्वरुप ग्रहण गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार अथ्र्याउने गरिएको छ ।
यसको रणनीति सबै प्रकारका आन्दोलनरत समूहलाई स्वीकार्दै, तिनिहिरुलाई संगठित तथा परिचालित गर्ने
यो श्रम सम्बन्ध स्पष्ट रहेको औपचारिक क्षेत्रको परम्परागत “ट्रेड यूनियन” को घेरा भित्रमात्र सीमित रहन्न, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष श्रम सम्बन्ध रहेको सबै श्रम क्षेत्रमा कार्यरतहरुलाई यसले समेट्छ
यसले ज्याला आर्जकको मात्र नभएर सबै प्रकारका श्रमजीवीहरुको स्वार्थ रक्षा गर्छ
यो “सामाजिक” आन्दोलन हो किनकी यसले परम्परागत ट्रेड यूनियन आन्दोलनले झैं आर्थिक तथा राजनीतिक विषयमा मात्र आपूmलाई सीमित गर्दैन, यसले दमनकारी आर्थिक राजनीतिक प्रणालीको “सामाजिक मूल्य” (सोसल कस्ट) लाई समेत छुन्छ ।
यसले श्रम आन्दोलनको फराकिलो दायारामा आपूmलाई उभ्याउंछ, र स्वभाविक रुपमा श्रम–सम्बन्धमा रहेको विविधता तथा जटिलतालाई स्वीकार्दै श्रमिकका स्वार्थलाई फराकिलो दायराबाट हेर्छ । यसको अर्थ हो, यसले ट्रेड यूनियन आन्दोलाई श्रमिकका अधिकारका सबै पक्षहरु जस्तै– आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सा“स्कृतिक सवालमा र सबै तहहरु–स्थानीय–राष्ट्रिय– विश्वव्यापी रुपमा परिचालित गर्छ ।
त्यसैले, सामजिक आन्दोलनकारी ट्रेड यूनियनको स्वार्थ अग्रगामी सामाजिक रुपान्तरण वाहेक केही हुनै सक्दैन ।
मर्यादित काम भनेको एउटा रणनीति हो, जसले जनतालाई केन्द्रमा राखेर दिगो विकासको परिकल्पना गर्दछ । मर्यादित काम भनेको न्यायोचित, समतामुखी र समावेशी समाज निर्माणको लागि त्यस्तो मुख्य तत्व हो, जुन रोजगार अभिवृद्धि, श्रमिकको अधिकार, महिला– पुरुष बीचको समानता, सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सम्वादको सिद्धान्तमा आधारित छ ।
त्यसैले मर्यादित कामको अर्थ भेदभाव विना रोजगारीमा समान पहु“चस“ग सम्बन्धित छ । यो श्रमिक र तिनका परिवारलाई मर्यादित जीवन जिउन पुग्ने जीवनोपयोगी पारिश्रमिकस“ग सम्बन्धित छ । मर्यादित काम बिरामी पर्दा, गर्भवती हु“दाजस्ता तपाईं हाम्रो जीवनमा देखापर्ने विभिन्न उतार चढावमा सामाजिक संरक्षण उपलब्ध गराउने विषयस“ग सम्बन्धित छ । मर्यादित काम भन्नासाथ त्यो शोषणबाट पूर्णतः मुक्त हुनु पर्दछ । यसले सामूहिक हकहितका लागि टे«ड यूनियन मार्फत सामाजिक सम्वाद गर्न श्रमजीवीवर्गलाई संगठन गर्ने अधिकार उपलब्ध गराउ“छ ।
हामीलाई मर्यादित काम किन चाहिन्छ त ?
आर्थिक वृद्धि मात्रै पर्याप्त हु“दैन, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक वृद्धिले गरिबीलाई स्वतः उन्मूलन गर्दैन । धेरै देशहरूमा के देखिन्छ भने सम्पत्ति जति केही व्यक्तिको हातमा थुप्रदै गएको छ । विकसित र विकासशील देशका समाजहरू दिनप्रतिदिन असमान हु“दै गइरहेका छन् । त्यसैले मर्यादित काम भनेको प्रमुख संयन्त्र हो, जसमार्फत सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्न सकिन्छ र गरिबीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
के बुझ्नु पर्छ भने सबै काम असल काम हु“दैन । विश्वमा १.४ विलियन मानिसहरू काम त गर्छन्, तर दिनको दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाउ“छन् । तिनीहरूस“ग या त कामै छैन वा उनीहरू असुरक्षित काम गर्न बाध्य छन् । जसरी गरिबी उन्मूलनको लागि रोजगर प्रमुख कुरा हो, त्यसैगरी मर्यादित काम श्रमिकहरूको अधिकार प्राप्ति र मर्यादित जीवनको लागि मुख्य विषय हो ।
मर्यादित काम गरिबी उन्मूलनको सा“चो हो । विश्वभरिका मानिसहरू– महिला हुन् कि पुरुष विश्वव्यापीकरणले दिगो र मर्यादित जीवन यापन गर्ने तथा उनीहरूका बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको सामान्य चाहना पूरा गरोस् भन्ने चाहन्छन् । र, यो मर्यादित काममा जोड दिएर मात्र सम्भव छ ।
मर्यादित काम सिर्जना गर्नको लागि अहिले भन्दा उपयुक्त समय कहिल्यै आउने छैन ।
 मर्यादित कामको लागि संघर्षरत श्रमिकहरू कामबाट निकालिएका छन्, धम्की, हतोत्साहनको शिकार भएका छन् वा मारिएका छन् । वर्ष २००६ मा पनि सयभन्दा बढी यूनियनकर्मीहरू मारिए, थुपै्र हजार जेलमा कोचिए, यातना दिइए र अक्सर उनीहरूलाई लामो समयसम्म थुन्ने पूर्जी थम्याइएको छ ।
 २२ लाख भन्दा बढी जनता व्यवसायजन्य रोग वा कार्यथलोको दुर्घटनाबाट मारिए ।
 १ करोड २३ लाख जनता बलपूर्वक लगाइने कामको धरापमा फसेका छन् ।
यस्तो अवस्थाले सबैभन्दा बढी असर कसलाई गर्ला त ? युवाहरू– ८ करोड ५० लाख युवाहरू वेरोजगार छन् । त्योभन्दा पनि बढी संख्यामा अर्धवेरोजगार अवस्थामा छन् । महिलाहरू जसको आम्दानी– पुरुषको आम्दानीको तुलनामा दुई तिहाइ कम छ । महिलाहरूले विश्वको पार्टटाइम कामको मुख्य हिस्सा (६० देखि ९० प्रतिशत) ओगटेका छन् । युरोपेली संघमा पार्टटाइम काम ८३ प्रतिशत महिलाहरूले गर्छन् ।